Okushibhile Okuphezulu - Imihlahlandlela yokuthenga ukuze uthenge ishibhile ku-inthanethi
Ukunakekelwa Komuntu Siqu kanye Nezempilo
Thola okudingayo phakathi kwazo zonke izigaba zethu
Uma ukuthola kunzima ukuthola umhlahlandlela wokuthenga umkhiqizo othile, ungasebenzisa injini yethu yokusesha, ezohlunga ezinkulungwaneni zokuhlaziya esizenzile ukuzama ukukusiza.
Izigaba ezidume kakhulu
Umgodi wesihlabathi wezingane
Ukunakekelwa komuntu siqu kanye nempilo
Senzani e-Top Baratos?
En Eshibhile Phezulu sibakweleta abasebenzisi bethu. Sifuna ukuthi ukwazi ukuthola ukubuyekezwa okuthembekile nemibono yemikhiqizo ezinhle futhi ezishibhile ofuna ukuyithenga. Ngemihlahlandlela yethu yokuthenga, uzothola umbono ocacile wokuthi yini ngempela oyidingayo, njalo ubeke phambili inani lemali.
Ngaphezu kwalokho, sifuna ukukwazi ukukusiza nganoma yimuphi umkhiqizo, kunoma yisiphi isigaba. Hhayi-ke ningabazali nifunela ingane yenu imikhiqizo engcono kakhulu, ninjalo uyahlanya yamakhompyutha afuna okwakamuva ubuchwepheshe, Phezulu Baratos sicabanga ngawe.
Yini ongayithola ku-Top Baratos?
Imihlahlandlela yokuthenga yakamuva
Bheka i- iziqondiso zokuthenga zakamuva esikwenzile:
Okuphezulu okushibhile 2022 - Inqubomgomo yobumfihlo - Imininingwane mayelana namakhukhi